अफगानिस्तानबाट एकैदिनमा एती धेरै नेपालीको उद्धार, स्वदेश आइपुग्दा देखिए अत्यन्तै खुशी ।। – Khabar28media
Top News Portal In Nepal
अफगानिस्तानबाट एकैदिनमा एती धेरै नेपालीको उद्धार, स्वदेश आइपुग्दा देखिए अत्यन्तै खुशी ।।
August 17, 2021 August 17, 2021 - by Vikash - LeaveaComment
अफगानिस्तानबाट कतार हुँदै १२७ जना नेपालीहरु काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनीहरु जजिरा एयरको विमानमार्फत् आज बिहान काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका छन् । अफगानिस्तानको काबुलबाट अमेरिकी एयरफोर्सले उनीहरुलाई उद्धार गरेर कतारको दोहा पुर्याएको थियो ।
दोहाबाट कुबेत हुँदै उनीहरुलाई काठमाडौं ल्याइएको हो । उद्धार गरेर ल्याइएका नेपाली अफगानिस्तानस्थित अमेरिकी दूतावासमा सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत रहेको बताइएको छ । उनीहरूलाई यूएस फोर्सको जहाजबाट काबुलबाट कुवेत पुर्‍याइएको थियो । कुबेतबाट चार्टड फ्लाइटमार्फत उनीहरू नेपाल आइपुगेका हुन् ।
अमेरिकी दूतावासमा सुरक्षागार्डका रूपमा रहेका ३८५ नेपालीलाई अमेरिकाले त्यहाँबाट उद्धार गरी कतारको दोहा पुर्‍याएको थियो । तीमध्ये १ सय २७ जना अघि बिहान आइपुगेका हुन् । उनीहरूलाई दोहाबाट कुवेतको अल–जजिरा विमानस्थलबाट नेपाल ल्याइएको हो । उद्धार गरिएका अन्यलाई पनि स्वदेश ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ताको घोषणासँगै त्यहाँ द्वन्द्व झन् चर्किएको छ । विद्रोही तालिबान समूहले त्यहाँको सत्ता फेरि कब्जामा लिएको छ । राष्ट्रपति असरफ घानी देश छाडेर हिँडिसकेका छन् । विदेशी नियोगहरुमा कार्यरत नेपालीलाई सम्बन्धित देशले उद्धार गरेर सुरक्षित ठाउँमा राखेको जनाएका छन् भने
नेपालले पनि सम्पर्कमा आउन आग्रह गरिरहेको छ । अफगानिस्तानमा रहेका १ सय ३४ नेपालीले आफ्नो विवरण टिपाइसकेका छन् । उद्धार गरेर ल्याइएका नेपाली अफगानिस्तानस्थित अमेरिकी दूतावासमा सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत रहेको बताइएको छ । उनीहरूलाई यूएस फोर्सको जहाजबाट काबुलबाट कुवेत पुर्‍याइएको थियो ।
अमेरिकाले आफ्नो खर्चमा उद्दार उडानमार्फत नेपालीलाई काठमाडौं ल्याएको हो । कामदारलाई स्वागत गर्न एयरपोर्टमा अमेरिकी दूतावासका कूटनीतिज्ञहरु पुगेका थिए । बिमानस्थलमा स्वागत पछि अमेरिकी दूतावासले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, काबुलस्थित अमेरिकी मिशनमा कार्यरत हाम्रा साथीहरू तथा गठबन्धनका
सहकर्मीहरूसँग काम गर्नुभएका नेपालीहरू मध्ये पहिलो उडानमार्फत आउनुहुनेलाई सकुशल काठमाडौंमा स्वागत गर्न पाउनु हाम्रो लागि सम्मानको विषय हो। हामी यहाँहरूको सुरक्षा लगायतको सेवाको लागि अत्यन्तै कृतज्ञ छौं। धेरै धन्यवाद।
काबुलस्थित अमेरिकी मिशनमा कार्यरत हाम्रा साथीहरू तथा गठबन्धनका सहकर्मीहरूसँग काम गर्नुभएका नेपालीहरू मध्ये पहिलो उडानमार्फत आउनुहुनेलाई सकुशल काठमाडौंमा स्वागत गर्न पाउनु हाम्रो लागि सम्मानको विषय हो। हामी यहाँहरूको सुरक्षा लगायतको सेवाको लागि अत्यन्तै कृतज्ञ छौं। धेरै धन्यवाद।🙏 pic.twitter.com/CyM7TqTdQw
— U.S. Embassy Nepal (@USEmbassyNepal) August 17, 2021
दसैं मनाउन अमेरिका उ,ड्न लागेकी अनिताले मन रु ‘वाउने नोटबुक लेखेर संसारबाट बि,दा भएकी थिइन्
मगर संसार ग्रुपद्वारा मास्क तथा खाना बितरण कार्यक्रम पोखरामा सम्पन्न
भर्खर ख’तरना’क बाढिले बाग्मती वरीपरीका बजार सबै ब’गायो, राजधानी धेरै डुबानमा ।। (भिडियो हेर्नुहोस्)
Previous Article अनाथ बालबालिकालाई सहयोग लिएर पुग्दा छायो खुसियाली, बच्चाहरुले फलाए यति धेरै अर्गानिक तरकारी (भिडियो)
Next Article फेवाताल पारी एस्तो अवस्थामा फेला पर्‍यो श व, डुङगामा ल्याउदै गर्दा देखीयो यस्तो दृश्य, हेर्नुहोस् । (भिडियो सहित)
View all posts by Vikash →
दसैं मनाउन अमेरिका उ,ड्न लागेकी अनिताले मन रु ‘वाउने नोटबुक लेखेर संसारबाट बि,दा भएकी थिइन् October 14, 2021
मगर संसार ग्रुपद्वारा मास्क तथा खाना बितरण कार्यक्रम पोखरामा सम्पन्न October 10, 2021
भर्खर ख’तरना’क बाढिले बाग्मती वरीपरीका बजार सबै ब’गायो, राजधानी धेरै डुबानमा ।। (भिडियो हेर्नुहोस्) September 30, 2021
कोरोना माहमारी नसकिदै देखा पर्‍यो फेरी एस्तो रोग, एस्ता छन् बच्ने अचुक उपायहरु ।। September 30, 2021
दशैको मुखमा काठमाडौं उपत्यकामा लागु भयो कडा नियम, यी कामहरु गर्न प्रतिबन्ध ।। (सूचना हेर्नुस्) September 30, 2021
Subin basnet on कतार प्रहरीमा भर्ना हुन चाहने नेपालीका लागि खुशीको खबर, कती हुन्छ तलब ?
Rudra kumar on कतार प्रहरीमा भर्ना हुन चाहने नेपालीका लागि खुशीको खबर, कती हुन्छ तलब ?
chudamani bhatt on कतार प्रहरीमा भर्ना हुन चाहने नेपालीका लागि खुशीको खबर, कती हुन्छ तलब ?
Bir bahadur thakali on कतार प्रहरीमा भर्ना हुन चाहने नेपालीका लागि खुशीको खबर, कती हुन्छ तलब ?
Copyright © 2021 Khabar28media.